Inona no jerena ao an-tanànan'i Volendam | Vaovao momba ny dia
Inona no jerena ao an-tanànan'i Volendam
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, Pays-Bas
Volendam dia kely tanàna fanjonoana any Netherlands, miorina akaikin'ny Farihin'i Markermeer. Ity tanàna ity dia eo akaikin'i Edam, ary izy io dia ampahany teo amin'ny seranan-tsambony, mandra-pahatongan'ny fananganana ny seranana vaovao ary nipetraka tao amin'ity faritra ity ny olona mandra-pahatonga ny vahoaka Volendam hamorona.
Tsidiho ny Volendam Zavatra vita izany raha manana andro tsy fiasana isika rehefa mankany Amsterdam, satria 22 kilometatra monja avy eo amin'ny tanàna izany, ary azo tratra amin'ny dia fohy. Na dia toerana fanjonoana taloha aza ity tanàna ity dia tena nanintona azy tokoa ka androany dia lasa toerana fizahan-tany ahafahanao mahita ireo tanàna kely manodidina an'i Amsterdam.
1 Inona no tokony ho fantatra momba an'i Volendam
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any Volendam
3 Museum Volendam
4 Toerana fitsangantsanganana
5 Museum an'i Palingsound
7 Marken sy Edam
Inona no tokony ho fantatra momba an'i Volendam
Volendam dia teraka tamin'ny Seranan-tsambo lehibe Edam, izay tohodrano rehefa natsangana ny seranana vaovao. Ity faritra ity dia natsangana ho toy ny fanariam-pako tsy maintsy ampiasaina ary nanorim-ponenana ny vondrom-piarahamonina izay hahita an'i Volendam, izay midika zavatra mitovy amin'ny 'tohodrano feno' noho ny niandohany. Androany dia tanàna akaikin'i Amsterdam izay mendrika hotsidihina ao anatin'ny iray andro. Na dia nifantoka tamin'ny asa fanjonoana teo amin'ny farihin'i Markermeer aza ny harinkarena tamin'ny voalohany, lasa motera toekarena iray manan-danja ho an'ny tanàna ny fizahan-tany.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Volendam
Ny dia mankany Volendam dia mandalo an'i Amsterdam foana. Izany hoe, raha nijanona tao an-tanàna izahay nandritra ny fialantsasatra dia manana fotoana foana hitsidihana ireo tanàna tsara tarehy manodidina ireo, mba hahafahanao manomana iray na roa andro hahita azy ireo. Ny fanofana fiara dia hevitra lehibe, satria izy ihany koa 22 kilometatra avy eo afovoan'i Amsterdam ary afaka manana fahalalahana mifindra manodidina ny tanàna hafa toa an'i Edam sy ny manodidina isika. Na izany aza, raha tsy te hiasa saina momba ny fanofana sy ny fandehanana any amin'ny Google Maps izahay, dia afaka mandray ny zotram-piaramanidina 316 avy ao amin'ny Station Central Amsterdam mankany Volendam hatrany Edam.
Ity tranombakoka ity dia miorina amin'ny tapany taloha amin'ny tanàna, amin'ny trano tsara tarehy sy haingo. Ao anatiny dia azo atao ny mahita fampirantiana ny fitafiana isam-paritra avy any amin'ny faritra sy Netherlands, ary koa sangan'asan'ny mpanakanto iraisam-pirenena izay aingam-panahy avy amin'ny jono na asa tanana any an-toerana. Manoro hevitra foana izahay ny hanamafisana ny ora sy ny vidin'ny toerana mialoha, satria mety hiova ny fampahalalana arakaraka ny vanim-potoana. Misokatra matetika ity tranombakoka ity manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 17 tolakandro ary mora ny fidirany, eo amin'ny 2,50 euro, noho izany dia mendrika hitsidika izy ary satria tsy dia lehibe dia tsy hitondra antsika ela. Afaka mahita zavatra mahaliana foana ianao ary iza no mahalala raha hiverina amin'io toerana io ianao.
El Amoron-dranomasina Volendam Saika io no tena sarobidy indrindra eto amin'ity tanàna ity. Amin'ny maha tanàna fanjonoana azy dia manan-danja lehibe ny seranan-tsambony ary ao no ahitantsika ireo trano mahazatra sy sambo tsara tarehy. Misy fivarotana sy trano fisakafoanana vitsivitsy hijanonana raha te handray mora isika. Fantatr'izy ireo any Volendam fa iray amin'ireo teboka matanjaka ao an-tanànany izy ireo ary izany no antony efa ananan'ny mpizahatany bebe kokoa. Fitsangatsanganana iray hafa izay tsy tokony hohadinoina dia ny faritra manan-tantara ao an-tanàna, misy tranobe tsara tarehy sy toerana mangina.
Museum an'i Palingsound
Ity dia tranombakoka iray hafa izay hitantsika ao an-tanànan'i Volendam, izany hoe natokana ho an'ny mozika tanteraka. Raha lohahevitra tianao io, dia mety hahaliana, satria afaka mahita zava-maneno, tantara ary rakitsoratr'ireo artista manan-danja ianao. Ny vidiny aza mbola ambany noho ny an'ny tranombakoka lehibe ary mihidy amin'ny Alatsinainy.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Volendam dia katolika ary ity fiangonana ity dia miorina amin'ny toerana nananganana ny voalohany fiangonana katolika tamin'ny 1860. Niitatra imbetsaka ity fiangonana ity mandra-pahatongany tamin'ny fananganana hitantsika ankehitriny, miaraka amin'ny fomba neo-baroque.
Marken sy Edam
Raha mandeha mijery an'i Volendam isika dia afaka mankafy fitsidihana haingana any amin'ny tanàna roa hafa eo akaiky sy tsara tarehy ihany koa. Miresaka an'i Marken izahay, izay miavaka amin'ireo trano hazo taonjato faha-XNUMX nolokoina miloko marevaka, tena mampiavaka an'i Hollande. Ity tanàna ity dia fanta-daza amin'ny fomban-drazana ary noho io antony io dia be mpitsidika koa izy. Ny manodidina anao dia afaka mahita ilay Pairo Van Marken Lighthouse mahafinaritra. Etsy ankilany, manana an'i Edam isika, eo akaikin'i Volendam, izay malaza manerantany noho ny fromazy boribory rakotra savoka mena. Amin'ny volana Jolay sy Aogositra isaky ny alarobia dia afaka mankafy ny tsenan'ny fromazy nentim-paharazana, hetsika iray mahasarika mpizahatany maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Inona no jerena ao an-tanànan'i Volendam
Ny catacombs an'i Roma
Fantaro ny Bran Castle